जनगायक जीवन शर्माको व्यथा र ‘छ माया छपक्कै’को कथा ! आपसमा यस्तो छ - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
प्याज महंगिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीद्वारा नखाने घोषणा, भान्सामा प्याज नाे इन्ट्री
वडाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर शिक्षकको जागीर, आगामी दिनमा राजनीतिमा नफर्किने
आज माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन हुँदै, नुवाकाेट र रसुवाकाे गाैरव
सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हानि पुर्याए तलब कट्टा !
कस्तो अचम्म ! आफ्नै एकाउन्टबाट आफैले पैसा निकालेर बैंकलाई ठगे प्रहरीले
दशक बढी लागेकाे माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ सोमबार उद्घाटन हुँदै, यस्ताे बन्याे याेजना
आज आईतबार, तपाईको यो हप्ताभरीको राशिफल हेर्नुहोस्,- साप्ताहिक राशिफल
बागलुङको वरेङ गाउँपालिकामा शान्ति स्थापना केन्द्र राखिने, सर्वसाधरणलाई अझ सहज
४ नेपाली खेलाडी बर्खास्त, कुवेत विरुद्ध खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका चार खेलाडी नाइट क्लबमा
कर्मचारी समायोजनमा नयाँ व्यवस्था, केही कर्मचारी निजामती समेत नहुने, यती बिभेद किन ?
जैमिनी नगरपालिकाद्धारा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिइने, (नमुना सहित)
पर्वतमा तेह्र दिनकी सुत्केरी महिलाको दुवै मिर्गौला फेल, नवजात शिशुको बिचल्ली, सबैकाे सहयोग माग्दै
पर्यटन र कृषि नै युवा समृद्विको मुख्य आधार हो : पर्यटन मन्त्री लम्साल
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती
तपाइको आजकाे राशिफल हेर्नुहाेस्, यि राशिहरूकाे अत्यन्तै राम्राे दिन छ
Home ब्रेकिङ न्युज जनगायक जीवन शर्माको व्यथा र ‘छ माया छपक्कै’को कथा ! आपसमा यस्तो छ
जनगायक जीवन शर्माको व्यथा र ‘छ माया छपक्कै’को कथा ! आपसमा यस्तो छ
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: ६ कार्तिक २०७६, बुधबार ११:२०
दिपक–दीपाको ‘छ माया छपक्कै’ हेरेपछि लपक्कै हुनु पर्ने, म त कन्फ्युज पो भएँ ! फिलिम चलिसक्यो । पैसा फलिसक्यो । माग्नेले हँसाई सक्यो । दिनेले रुवाईसक्यो । दर्शकले दिईसके । निर्माताले लिईसके । अब तारिफ र आलोचनाको के अर्थ छ त ?
छ, अवस्य छ । शत्प्रतिशत सफल केही पनि हुन्न । खोट लाउनै नमिल्ने कोही पनि हुन्न । भन्न पर्ने केही कुरा छन्, पुरा गर्नु पर्दथ्यो, ती अपुरा छन् । तर म त्यतातिर गईंन, सोझै कथाकार/निर्देशक दीपेन्द्र लामातिर लागें ।
कथा छ– सधैं खडेरी पर्ने घडेरी गाउँमा पानी छैन । जहिल्यै काकाकुल हुनुपर्ने गाउँमा सधैं प्रगतिशिल पार्टीले जित्छ तर पानी कहिल्यै आउंदैन ।
नानी र पानीको चक्करमा घडेरी गाउंका केही प्रगतिशिल युवाहरु प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रबेश गर्छन् । त्यस पार्टीले उनिहरुलाई प्रयोगमात्रै गर्छ । फेरी पार्टी छोडेर उनिहरुले ‘नो भोट’ अभियान छेड्छन् । चुनावमा कसैले भोट हाल्दैन । आन्दोलनको यो शान्तीपूर्ण तरिका सफल हुन्छ । पार्टीहरुले सामुहिक प्रतिबद्धता जनाउंछन् । अनि घडेरी गाउंमा पानी आउँछ । मर–मसला सहित सिनेमा सकिन्छ । हेर्न मज्जा आउँछ ।
‘छ माया छपक्कै’मा ‘कमरेड’, ‘प्रगतिशिल’, ‘क्रान्ती’जस्ता शब्दहरु प्रयोग छन् । घडेरी गाउँका सिद्धान्तनिष्ठ कमरेड कुलप्रसाद र केन्द्रका आदर्शच्यूत नेतृत्वको वरिपरि कथा घुमेको छ ।
‘केहीले कम्युनिष्ट बिरोधी चलचित्र भन्ने आरोप लगाए ।’ निर्देशक दीपेन्द्र लामाले सोधे, ‘तपाईंलाईचाहीं कस्तो लाग्यो सर ?’ त्यतिबेला भन्न भ्याईएन, अहिले आफ्नो बिचार लेख्दैछु, भूलचुक लिने दिने ।
‘कम्युनिष्ट’, ‘बिरोधी’, र ‘चलचित्र’: यी तिनवटा शब्द एकै ठाउंमा अंट्नै सक्दैनन् । चलचित्रको काम मनोरञ्जन र शन्देश हो । बिरोधीको काम बिरोध र अवरोध हो । कम्युष्टिले निष्ठापूर्वक देश र जनताको काम गर्ने हो ।
मैले बुझेको यही हो ।
कम्युनिष्ट भनेको जोगीजस्तै हुन्छन् जसको नीजि सम्पती हुंदैन रे ! ब्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन रे ! सम्पूर्ण जीवनमा देश र जनतामा समर्पित गर्छन् रे ! जसरी जोगीको घरबार हुँदैन त्यसैगरी कम्युनिष्टको दरबार हुंदैन रे ! जनता जस्तोमा सुत्छन्,
कम्युनिष्ट त्यस्तैमा बस्छन् रे । जे खान्छन्, त्यही खान्छन् रे !
तर, अहिलेको सन्दर्भमा यी सबै दन्त्यकथामात्र हुन् जो पुस्तकमा मात्र पाईन्छन् । मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भनेर ज्युंदै मर्न सिकाउने अन्धविश्वास र क्रान्तीपछि मुक्ति पाईन्छ भन्दै लड्न पठाउने सिद्धान्तमा खासै भिन्नता छैन । यस अर्थमा सिनेमा ‘कम्युष्टि बिरोधी कथा’ हैन, सिद्धान्त र चरित्रबिचको अनमेल संबन्धको यर्थाथ चित्रण हो ।
अहिलेको युवाले जुन पार्टीको सिद्धान्त अंगाल्छ त्यो माक्र्सबादको ठेली पढेर वा समाजवादको बेद घोकेर वा राजाबादको रहस्य बुझेर अंगालेको हैन । बाबु कम्युनिष्ट भएकाले छोराहरु कम्युनिष्टमा लागेका होलान् ! श्रीमान् कांग्रेस भएकाले श्रीमती कांग्रेस भएकी होलिन् ! आशा, निरासा, अपेक्षा, सुरक्षा आदी ईत्यादिका कारण हामी यो वा त्यो पार्टीको नजिक वा टाढा भएका हौं ।
हाम्रो यही कमजोरीलाई राजनैतिक शक्तिहरुले आफ्नो एटिएम (एनि टायम मतदाता) बनाएर दुरुपयोग गरिरहन्छन्, यो बादी होस् वा त्यो बादी ।
‘छ माया छपक्कै’ले उठाएको बिषयलाई पुष्टि गर्न अहिले जन गायक जीवन शर्माको अवस्था हेरे पुग्छ । सधैंभरी जनताको गीत गाएर हिंड्ने जीवनले अलिअलि भएको सम्पती छोराहरुलाई दिएर हिंडे । आफ्नो भन्नु केही छैन । छोराहरुको अवस्थापनि झण्डै त्यस्तै छ । ‘वास्तविक सर्वहारा’ जीवनका छोरा अहिले जीवन मरणको दोसांधमा छन् । उपचार गर्न धौ धौ छ ।
उपचारको क्रममा आधा डुबी सकेकाछन्, निको भएपनि नभएपनि रिणमा चुलुम्म डुब्छन् । के आदर्शको राजनीति गर्नु भनेको यसरी नै डुबान क्षेत्रमा पस्नु हो त ?
यो त चिनिएका जीवनको कथा भयो । दुरदराजका गुमनाम हजारौं जीवन शर्माहरु आर्दशको राजनीति गर्दागर्दै रोगी बनेकाछन् । जोगी बनेकाछन् । सिद्धान्तले भोको पेट नभरिने निश्कर्षमा पुगेकाछन् ।
अंग्रेजीमा स्नातोकोत्तर गरेका जीवन शर्माले चाहेको भए सुबिधा सम्पन्न जीवन बांच्न र बचाउन सक्थे । तर, उनले जनताको साथ रोजे । नीजि सम्पती तोडे । कतै ब्यवसाय गरेनन् । छोराहरुसंग भएका अलिअलि नगद पनि नारायण भयो । अहिले आफुसंग पनि फुट्या कौडी छैन । तरपनि गंभीर बिमार छोरोको हात सुम्सुम्याउंदै जीवन भन्छन्–‘मलाई बिश्वास छ, जीवन हुञ्जेल मृत्यू आउंदैन ।’
‘छ माया छपक्कै’ कम्युनिष्ट बिरोधी कथा हैन, सिद्धान्तलाई ब्यवहारमा उतार्न दबाब दिने चलचित्र हो । सिनेमालाई नाम र दाम काफी मिलेको छ । तपाईंको सिनेमाका बीजपात्र जीवन शर्माहरुलाई अप्ठेरो परेको बेला भरथेग गर्नुपर्छ है दीपकजी, थप बलियो शन्देश जान्छ । गजुरियल डटकम बाट साभार
सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण रोकियो, यस्ताे छ कानुनी व्यवस्था
“भाईले आशु झार्छ होला मेरो लागि कफन किन्दा”, गाैरी के.सी का कणप्रिय गजल
२ मंसिर २०७६, सोमबार १६:५०
२ मंसिर २०७६, सोमबार १२:०६
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०९:४८
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०६:४४
१ मंसिर २०७६, आईतवार १८:२६
१ मंसिर २०७६, आईतवार १६:३८
१ मंसिर २०७६, आईतवार ०६:४२
३० कार्तिक २०७६, शनिबार १८:४०
३० कार्तिक २०७६, शनिबार १५:१९
३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०६:३६
जैमिनी नगरपालिकाद्धारा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिइने, (नमुना सहित) कार्यक्रम अनुसार प्रस्तावना पेस गर्न आह्वान
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १८:२३
पर्वतमा तेह्र दिनकी सुत्केरी महिलाको दुवै मिर्गौला फेल, नवजात शिशुको बिचल्ली, सबैकाे सहयोग माग्दै 'गरिबमाथि भगवानले न्याय गरेनन्, सहयोगी हातको आस'
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०९:५०
पर्यटन र कृषि नै युवा समृद्विको मुख्य आधार हो : पर्यटन मन्त्री लम्साल ताराखोला बहुउद्येश्यी रेन्बो ट्राउट होम स्टेको उद्घाटन
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०६:५३
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०६:३३
२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०६:११
जैमिनी नगरपालिकाद्धारा लेखापरिक्षकलाई सुचिकृत हुन आग्रह, बिद्यालयको ले.प गर्न पाउने – सुचना
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १८:५४
केशर पण्डितको साहित्य : “आऊ युवा राजनीतिमा”
२५ चैत्र २०७३, शुक्रबार २०:५२
२८ जेष्ठ २०७४, आईतवार २१:४०
३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०४:१५
काठमाडौमा अठहत्तर प्रतिशतले तिर्दैनन् बहाल कर
३ असार २०७४, शनिबार ०८:५६